Họrọ ihe kacha mma kachasị mma abụghị ọrụ siri ike. Ọtụtụ dabere na ule dị ukwuu a na-eme, mana akụkụ buru ibu na-adaberekwa na gị – onye ọrụ. Onye ọ blala nwere mkpa dị iche iche ma a bịa na a Network Private Network (VPN) ụrụ ma dịka ọ masịrị ma ọ bụ na ọ bụghị, ọ dịghị mfe ịchọta otu nke kachasị mma na ihe niile.
N’ozuzu, ụ bụ ezie na enwere m ọtụtụ VPNs achọtala m na e nwere nnukwu aha diche iche ndị na-arịwanye elu na ugboro ugboro ma na-atụle nke ukwuu n’ụzọ niile. Nke a na-agụnye nzuzo na amaghị aha, ọsọ na nkwụsi ike, ọkwa ọrụ ndị ahịa, atụmatụ ntanetị na N’ezie, njirimara ndị ọzọ tinyere nhọrọ ọnụahịa.
0.1 VPNs של Nleta Ego Ntanetị & Atụmatụ (אמליט מרץ 2020)
1 Ih kacha mma 10 VPN ụrụ nke 2020
1.1.1 Ngosipụta ngwa ngwa ExpressVPN
1.3 5. FastVPN
1.4 IHV VPN dị mkpa # 2- Nchedo
1.4.1 VPN מגדיר את ero maka ezigbo ọsọ:
1.5 Njirimara VPN isi 4 XNUMX – אייל מזויף
1.6 VPN של Njirimara isi 6 XNUMX – Ọrụ ndị ahịa
2 Kedu ihe kpatara oge ndụ VPN agaghị abụ ezigbo ọrụ
3 VPN N’ihe eji eme ihe – Gịnị kpatara ị ga-eji atụle VPN?
3.2 3. VPN dị ọnụ ala שירות
3.4 7. VPN maka חופש דיגיטלי
VPNs של Nleta Ego Ntanetị & Atụmatụ (אמליט מרץ 2020)
Maka ịdị mma zuru oke na ụdị niile, enwere ndị na-eweta VPN atọ ị ga-elele na 2020: NordVPN, Surfshark, na ExpressVPN.
Trialnụahịa kacha mma-egbu osisi משפט חינם SavaNetflix NkwadoNkwado P2Pngwaọrụ
3.49 $ לסכין 30 ụbọchị 3,000 + 5
$ 1.99 / סכין 30 ụbọchị 3,000 + 5
0.83 $ לסכין 10
$ 2.42 / סכין 5
7.99 $ לסכין 31 ụbọchị 2,000 + נקה א 30 ụbọchị 700 + נקה א 7 ụbọchị 1,100 + נקה א Ndụmọdụ bara uru maka ndị na-ere ahịa VPN
1- NordVPN אינו מכיר את הקובץ 70% – כל הזכויות שמורות (איחוד 30).
2- VPN של ממשק ה- Otu esi ahọpụta? –
3- Okwu d ich iche maka VPN כמעט כל אחד:
Ih kacha mma 10 VPN ụrụ nke 2020
יתרונות nke NordVPN
Ihe a na-akọ na njirimara-juru
Nkesa netwọk nkesa
ExpressVPN bụ otu ụdị ama ama ama na ntụkwasị obi na azụmaahịa VPN ma bụrụkwa eziokwu, otu n’ime nhọrọ anyị kachasị elu. Dabere na איי הבתולה הבריטיים, ụrụ ha bụ nke a pụrụ ịtụkwasị obi, nke dị nchebe ma kwụsie ike.
Nwee ihe karịrị 3,000 סבא עד mba 94 gburugburu ụwa, netwọk ya dị ukwuu na-enye ndị ọrụ site na ọ bụla mba ọ bụla na-enwusi ngwa ngwa ngwa. Nepepta nke ike ọ na-enye bụ ogologo ma dị oke mma, gụnyere ntinye ederede dị elu, nweta ọdịnaya na new מיקום גיאוגרפי- ọrụ dịka netflix na BBC iPlayer na nkwado maka òkè P2P.
N’ezie, e nwekwara טון nke mgbakwunye nke na-abịa na ọrụ nke na-eme ka ọ bụrụ nọmba na ndepụta a.
אתר אחראי על שם אמלייט בסך 8.32 $ קווה ga נווה גאה נ’יהו, נקבה דווה מוטו איקווו נא אקụקụ דị אלו.
Mụtakwuo maka ExpressVPN na nyocha m dị omimi.
Ngosipụta ngwa ngwa ExpressVPN
M jisiri ike nweta 83 Mbps maka nbudata ọsọ ọsọ na ExpressVPN. Nke a VPNs abụghị mgbe niile na ọtụtụ.
Nlegharị ọsọ ọsọ sitere na ihe nkesa US.
Ngalaba פינג si na netwọk סינגפור na-egosi 11 ms, bụ nke weere dịka ezi mma.
Ntagharị ọsọ ọsọ si na ihe nkesa סינגפור.
P2P na טרנינג
Akwụkwọ dị mma maka mmiri. Echere m na okporo ụzọ P2P nwere ike ịba ọsọ ọsọ karịa ọhụụ.
Enwere ike ịmara ọtụtụ n’ime aha a nke ukwuu, mana enwere ike iju m anya ka ọ dị gị ugbu a. Na ilele nke mbụ onye ahịa TorGuard ga – adị ka ọ bụ obere ụlọ akwụkwọ ochie ọ bụghị dị ka nke a na-egbu maramara n’ọnụ ya dịka isi atọ anyị na ndepụta VPN kachasị mma anyị.
Ma atụmatụ nhọrọ nhọrọ ọtụtụ ndị ọ wuru n’ime ọrụ yana nnukwu njikọ njikọ na-eme ka nke a dị mfe n’ime oke nhọrọ m. Ikike ịhazigharị ọkwa ezoro ezo nwere ike ọ gaghị adị ka nnukwu echiche mana ọ na-enye ndị ọrụ aka ịchekwa nchedo na amaghị aha dịka mkpa ha si dị.
TorGuard na-ebido ịnye ohere maka usoro ọhụụ WireGuard ọgbọ na-esote, nke pụtara na ọ na-ebi na njedebe nke nkà na ụzụ VPN.
Ụnụ ahịa na-amalite ị ka $ 4.99 קווה ọnwa.
Mụtakwuo maka TorGuard VPN na nyocha a.
חסרונות טור טורארד
Ọnụ אגו dị elu
Ihe gbasara FastestVPN
Ihe gbasara PrivateInternetAccess
Na-agụnye mgbakwunye dịka adblocker na נגד תוכנות זדוניות
SOCKS5 Proxy gụnyere
מגן נקודה חמה של גבסרה
תמיכה טכנית ייעודית ולא מבוגרת 24/7
Nzuzo zuru ezu site na trackers
Ogologo oge nkwa ịkwụ ụgwọ אגו
Ihe gbasara PureVPN
שרתים מוכנים לאוזון
Ihe gbasara VyprVPN
Nweta zuru oke na Netflix na ebe ọzọ-ejedebe ọdịnaya
Ihe gbasara IPVanish
Nweta ohere ị ga-akwụ ụgwọ ụgwọ MBIP
Na-at aro VPN maka kacha mma אנונימיות:
NordVPN – N’ịbụ nke hiwere isi na פנמה, ụlọ ọrụ VPN a dabara n’okpuru ikike obodo (nke na-emezughi oke n’ụzọ iwu njigide data).
כריש גולש – Surfshark na-anabata kaadị akwụmụgwọ niile maka ịkwụ ụgwọ (ויזה, מאסטר, AMEX, גלה) ma na-enye nhọrọ ịkwụ ụgwọ na-amaghị aha gụnyere Bitcoin, GooglePay na AliPay.
IHV VPN dị mkpa # 2- Nchedo
אתר na usoro nzuzo ezoro ezo wuru na njiri mara nke sọftụwia onye ahịa, VPN taa na-enye nchekwa na ọtụtụ ọkwa. נ’ז’י, ihe kachasị mkpa bụ nchekwa na ntụkwasị obi nke njikọ ọ na-eme n’etiti gị na thentanetị ọ bụ ezie.
Otu ihe ọzọ na ọtụtụ ndị na-enye ụrụ VPN bg igbu ọkụ. Nke a pụtara na oge ọ bụla njikọ dị n’etiti ngwaọrụ gị na ihe nkesa VPN agbajiri ma ọ bụ furu efu n’ihi ihe ọ bụla, onye ahịa VPN ga-akwụsị נתונים niile site na ịpụ ma ọ bọrụ na.
VPNs nọkwa ogologo oge na ụfọdụ weebụsaịtị ma ọ bụ ọbụna gọọmenti nwere ahụmahụ n’ịghọta ọrụ VPN. Ndị na-ahụ maka ụrụ VPN ma mara nke a ma mee ka otu akụkụ a na-akpọ התגנבות, Ghosting או VPN ערפול (okwu okwu dịgasị iche, mana ha na-apụtakwa otu ihe ahụ). Nke a na-enye aka na-emegharị usoro ndị na-achọsi ọrụ ike maka ndị ọrụ VPN.
Ụfọdụ VPNs na-aga ogologo iji nyere ndị ahịa ha aka ịchekwa aha ha ma wee bịa na njirimara a na-akpọ VPN abụọ ma obu otutu hop. Nke a pụtara na ijikọ na otu sava VPN wee mezie njikọ ahụ site na sava ọzọ VPN tupu ịpị ịntanetị. E wezụga ụzọ mbugharị ya, הצפנה na-ezobe ya nke na-agbakwunye nchebe ọzọ.
NordVPN na-eji izo ya ezo abuo iji hụ na nzuzo na nchedo kachasị elu (mttakwuo nke anyị Nyocha NordVPN).
E ויזגה נאנקה א, א-אגבקוווניה ọrụ ndị ọzọ na ọtụtụ VPN ọrụ oge niile dịka nchịkọta תוכנות זדוניות, nkwụsị ọkọlọtọ weebụ na ndị ọzọ. Ọ bụ ezie na ihe ndị a nile dị mma, echezọla nzube bụ isi – na-ejikọta njikọ gị n’enweghị aha.
VPN מגדיר את ero maka ezigbo ọsọ:
ExpressVPN – Hostingdebere ihe karịrị puku sava atọ gave mba 3,000 gburugburu ụwa, netwọk ya sara mbara na-enye ndị ọrụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mba ọ bụla ohere ịnweta ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa.
ExpressVPN ọsọ ule
ExpressVPN ọsọ ule na-esi n’aka onye nkesa אסיה. Ping = 11 ms, budata = 95.05 Mbps, bulite = 114.20 Mbps (lee nkọwa zuru oke na ExpressVPN).
בקשה לאקספרס VPN לשבת באוסטרליה עד nkesa. פינג = 105 ms, budata = 89.55 Mbps, bulite = 38.76 Mbps.
Njirimara VPN isi 4 XNUMX – אייל מזויף
Cheta na obughi oge oso banyere oso, kamakwa idiadi. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịkwanye ọdịnaya Netflix US dịka ọmụmaatụ, ị ga-achọ VPN nke nwere sava na mba ahụ. N’otu aka ahụ, na UK ma ọ bụrụ na ị na-elele ọdịnaya iBBC.
Ọ bụrụ na ị nọ na mba nke na-eleta Intanet n’ụzọ dị ukwuu, ma ọ bụ na-eme njem na otu, dị ka סין, Jide N’aka na ọ họrọ ọrụ VPN dị mma na ịnweta gburugburu. הו סירי אייקנה לסין איביי איהההההההההההההההההההההההההוא..
Iji merie nke a, ụfọdụ ụlọ ọrụ VPN na-eji mkpofu nkesa ihe nkesa nke nwere היו like inye aka na-agafe ụfọdụ ihe mgbochi ịntanetị dịka firewalls רשת. Nke a na – ahụ maka na VPN gị na – arụ ọrụ na mba ndị ahụ nwere nyocha siri ike.
TorGuard – Ndekọ ọsọ kachasị mma, nnukwu uru, ma nweta gburugburu Iyi na-aga site na ọtụtụ ספקי אינטרנט.
VPN של Njirimara isi 6 XNUMX – Ọrụ ndị ahịa
TorGuard – otu n’ime ụrụ VPN kachasị akwado, na-agba nzukọ na-arụ ọrụ iji kwado ndị ọrụ יה (mttakwuo ihe na Ntụleghachi TorGuard טימותי).
Otu ihe m choro imesi ike bu na obu maka oru nke teknuzu dika VPN, onwebeghi ihe nghapu maka ulo oru ndi n’enye aka na ya adighi enye ezi nkwado nke ndi ahia. Ọ dị mkpa. Ọ bụrụ n ‘ị na-edebanye aha maka ọrụ VPN, gbaa mbọ hụ na ị ga-aga nyocha ụfọdụ iji hụ otu ha si eme na nkwado ndị ahịa.
Na ụfọdụ na-atụkwasị obi n’usoro usoro tiketi dị njọ, mana ha nwere ike ịka nká ịzaghachi. אתה ga – eche n ‘ịnọdụ n’ụlọ na iwe iwe ka דואר אלקטרוני ọ Bụla na-abịakwute gị mgbe ụbọchị ma ọ bụ abụọ gachara – צ’טה, ị na-akwụ ụgwọ maka ihe ùgwù nke iji ọrụ חה.
Kedu ihe kpatara oge ndụ VPN agaghị abụ ezigbo ọrụ
Providersfọdụ ndị na-enye ọrụ VPN היו echiche nke inye ‘Ndụ Ndụ’ na ọrụ ha. Ọ bụ ezie na nke a nwere ike iyi ka izu ohi maka ndị n’ime gị na-eche VPN ande ndụ ya maka ma eleghị anya $ 100 – kwụsịrị ịtụle ya.
אתר VPN הוא לא מוגדר ọlọ ọrọ ọrụ iji tinye nnukwu אגו na mmepe ngwaahịa, akụrụngwa, akụrụngwa, yana ụgwọ ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ha ga-ewere ego gị otu oge, nye gị oge ndụ gị – gịnị ga-eme mgbe ọdọ mmiri ahụ bidoro nkụ?
Chee echiche dika atumatu ponzi, ebe ndi ohuru no na akwado oru gi. Mgbe atụmatụ ahụ buru nnukwu ibu karịa אגו ọhụụ iji kwado, ọ na-ada. Na atụmatụ ponzi nke ga-ebute mmebi אגו.
Na VPN ọ bụghị ihe doro anya. Nwere ike ịchọpụta mgbaàmà na-enweghị ọrụ na-apụ na azụmaahịa. Uzo dị nwayọ, njikọta dị njọ, na nke jọrọ njọ – enwere ike ịnọchi anya nchekwa site na nkwado na nkwado adịghị mma.
N’aka nke ọzọ, onye na-eweta ọrụ nwere ike ịbelata ego ya site na ire data gị, nke dị njọ karịa ịnye ọrụ dị ala. Yabụ tupu ịkwatu kaadị akwụmụgwọ gị maka atụmatụ ndụ gị, chee maka ọghọm dị na ya nwere ike ibilite na atụmatụ dị ka nke ahụ. Onweghi onye nike inye onyinye n’efu.
VPN N’ihe eji eme ihe – Gịnị kpatara ị ga-eji atụle VPN?
VPN tụrụ aro maka ụmụ akwụkwọ: NordVPN (15% אגו ụmụ akwụkwọ)
Anyị niile nọ ebe ahụ dịka ụmụ akwụkwọ; oge niile na mkpirisi אגו ma banye na nsogbu. אתר na mgbawa nke igwe dijitalụ na nke mgbasa ozi, nchekwa na nzuzo na sọks abụrụla mkpa ngwa ngwa maka ụmụ akwụkwọ gburugburu ụwa.
Mkpanaka ngwa ọdịnala ha na mgbakwunye ihe nchọgharị ha na-emekwa ka ha dị mma maka ụmụ akwụkwọ na-aga, na-enye ohere ọrụ nchebe na laptọọpụ ha na ama na ebe ọ bụla na kampos.
3. VPN dị ọnụ ala שירות
VPN tụrụ aro maka ịkpọghee: ExpressVPN, NordVPN
Fọdụ mgbasa ozi mgbasa ozi na-amachi ọdịnaya dabere na ọnọdụ n’ihi ihe dị iche iche dịka iwu obodo akọwapụtara, iwu nyocha, ma ọ bụ nkwekọrịta ikikere. בקר ב- BBC Player Netflix. Iji nweta ihe a, ụrụ VPN na-enyere ma ọ bụghị naanị VPN ga-eme.
Ụfọdụ VPNs dị mma na ya karịa ndị ọzọ, ebe ọtụtụ ndị na-adabere na ebe nchekwa. Kasị mma ga-arụsi ọrụ ike bugharia ike nkesa IPs ma mepụta לרשימת ההיתרים מופיעה שם ל- IP של אמצ’יבידו. N’ezie, ụfọdụ VPNs maara na ha apụghị akwado Netflix ma kwuo n’eziokwu na ha apụghị ịrụ ọrụ ha.
אתר na ike ọsọ ya dị oke mma na oke netwọ nkesa sava dị obosara, ExpressVPN na NordVPN nwere ike ịbụ abụọ kachasị mma na aụụmaahịa maka ịgbasa mgbasa ozi site na ọtụtụ isi – ọ bụflix n. Ọsọ ọsọ יא היינו כמו idobe vidiyo HD na Netflix doro anya nadepụta nke ihe ndị mmadụ na-achọkarị.
VPN na-atụ aro maka טורינג: ExpressVPN, TorGuard
Mayfọdụ n’ime unu nwere ike ịnụla na VPN na -eme faịlụ P2P (Torrenting) ọsọsọ mana nke ahụ abụghịcha eziokwu. Ihe bụ eziokwu bụ na iyi obodo ụfọdụ nwere ike ime ka egbuo gị nnukwu ma ọ bụ tụọ gị mkpọrọ ma ọ bụrụ na ejiders gị ihe na-ezighi ezi.
N’ọtụtụ oge enwere ndị na-enye ọrụ ntanetị na-echegbu iyi mgbe ha na-ekwu na ndị nkesa P2P faịlụ na-eri ọtụtụ רוחב פס dịnụ. Nke a arụpụtala ọtụtụ mgbe, na-ebelata ọsọ nke ndị ọrụ P2P.
VPN של אייזבו – d Torka TorGuard, ga – enyere gị aka ịgagharị na iyi iyi ndị ספקי שירותי אינטרנט ndị a. N’ezie, mgbe VP na-eji VPN na-akụ ihe, ISP gị agaghị amatakwa na ị na-agba.
7. VPN maka חופש דיגיטלי
Anyị na-eji njikọ njikọta na isiokwu a. WHSR nweta ụgwọ ntinye aka n’aka ụlọ ọrụ ndị a kpọtụrụ aha na isiokwu a. Echiche anyị dabeere na ezigbo ahụmahụ na נתונים nkesa נתונים n’ezie.
Họrọ ihe kacha mma kachasị mma abụghị ọrụ siri ike. Ọtụtụ dabere na ule dị ukwuu a na-eme, mana akụkụ buru ibu na-adaberekwa na gị – onye ọrụ. Onye ọ bụla nwere mkpa dị iche iche ma a bịa na Virtual Private Private Network (VPN) ụrụ ma dịka ọ masịrị ma ọ bụ na ọ bụghị, ọ dịghị mfe ịchọta otu nke kachasị mma na ihe niile.
N’ozuzu, ọ bụ ezie na enwere m ọtụtụ VPNs achọtala m na e nwere nnukwu aha dị iche iche ndị na-arịwanye elu na ugboro ugboro ma na-atụle nke ukwuu n’ụzọ niile. Nke a na-agụnye nzuzo na amaghị aha, ọsọ na nkwụsi ike, ọkwa ọrụ ndị ahịa, atụmatụ ntanetị na N’ezie, njirimara ndị ọzọ tinyere nhọrọ ọnụahịa.
0.1 Nleta Ego Ntanetị VPN-ovi & Atụmatụ (Emelitere ožujak 2020.)
1 Ihe kacha mma 10 VPN navečer 2020
1.3 5. NajbržeVPN
1.4 IH VPN dị mkpa # 2- Nchedo
1.4.1 VPN tụrụ aro maka ezigbo ọsọ:
1.6 Njirimara VPN je 6 XNUMX – Ọrụ ndị ahịa
3 N’ihe eji VPN eme ihe – Gịnị kpatara ị ga-eji atụle VPN?
3.2 3. VPN dị ọnụ ala Servis
3.4 7. VPN maka Digital Freedom
Nleta Ego Ntanetị VPN-ovi & Atụmatụ (Emelitere ožujak 2020.)
Maka ịdị mma zuru oke na ịdị niile, prepustite se VPN-u na kraju e-elele 2020. godine: NordVPN, Surfshark, na ExpressVPN.
Ọnụahịa kacha mma-egbu osisiBesplatna probna verzija SavaNetflix NkwadoNkwado P2Pngwaọrụ
3,49 dolara / nož 30 ụbọchị 3000 + 5
1,99 dolara / nož 30 ụbọchị 3000 + 5
0,83 dolara / nož 10
2,42 dolara / nož 5
7,99 USD / nož 31 ụbọchị 2000 + Nke a 30 ụbọchị 700 + Nke a 7 ụbọchị 1100 + Nke a Ndụmọdụ bara uru maka ndị na-ere ahịa VPN
1- NordVPN dị ugbu a na ere ịkwụ ụgwọ 70% – Pịa ebe a iji nye iwu (ụbọchị ikpe n’efu 30).
3- Okwu dị iche iche maka VPN tụrụ aro anyị:
Ihe kacha mma 10 VPN navečer 2020
web stranica: https://www.expressvpn.com/
ExpressVPN je ụdị ama ama na ntụkwasị obi na azụmaahịa VPN ma bụrụkwa eziokwu, otu n’ime nhọrọ anyị kachasị elu. Dabere na Britanskim Djevičanskim otocima, ọrụ ha bụ nke a pụrụ ịtụkwasị obi, nke dị nchebe ma kwụsie ike.
Nwee ihe karịrị 3000 sava na mba 94 gburugburu ụwa, netwọk ya dị ukwuu na-enye ndị ọrụ site na ọ bụla mba ọ bụla na-enwusi ngwa ngwa ngwa. Ndepụta nke ike ọ na-enye bụ ogologo ma dị oke mma, gụnyere ntinye eadinge dị elu, nweta ọdịnaya na njikwa geolocation – ụrụ dịka netflix na BBC iPlayer na nkwado maka òkè P2P.
Sitenụ ahịa na-amalitsko mjesto na 8,32 $ na kvadratu ọnwa gaa n’ihu, nke dw mwute ikwu na akụkụ dị elu.
Važno je ExpressVPN
M jisiri ike nweta 83 Mbps maka nbudata ọsọ ọsọ na ExpressVPN. Nke abggh ni mgbe niile na ụtụtụ VPNs.
Ngalaba ping si na netwọk Singapuru na-egosi 11 ms, bí nke weere dịka ezi mma.
Ntagharị ọsọ ọsọ si na ihe nkesa Singapuru.
web stranica: https://torguard.net/
Ọnụ ahịa na-amalit dị ka $ 4,99 kwa ọnwa.
Protiv Tor Toruarda
Ọnụ ego dị elu
Ihe gbasara NajbržiVPN
Na-agụnye mgbakwunye dịka adblocker na anti-malware
SOCKS5 Proxy igra
Ihe gbasara Hotspot štit
Namjenska, na-enyere 24/7 tehnička podrška
Nzuzo zuru ezu site na trackerima
Ndị ọrụ P2P raara onwe ya noye
Dabere u Švicarskoj
Nema više MBIP-a
Na-atụ aro VPN maka kacha mma anonimnost:
NordVPN – N’ịbụ nke hiwere isi in Panama, ụlọ ọrụ VPN a dabara n’okpuru ikike obodo (nke na-emezughi oke n’ụzọ iwu njigide data).
Surfshark – Surfshark na anabata kaadị akwụmụgwọ niile maka ịkwụ ụgwọ (VISA, Master, AMEX, Otkrijte) ma na-enye nhọrọ ịkwụ ụgwọ na-amaghị aha gụnyere Bitcoin, GooglePay na AliPay.
IH VPN dị mkpa # 2- Nchedo
Site na usoro nzuzo ezoro ezo wuru na njiri mara nke sọftụwia onye ahịa, VPN taa na-enye nchekwa na ọtụtụ ọkwa. N’ezie, ihe kachasị mkpa bụ nchekwa na ntụkwasị obi nke njikọ ọ na-eme n’etiti gị na thentanetị ọ bụ ezie.
Otu ihe ọzọ na ọtụtụ ndị na-enye ọrụ VPN bụ igbu ọkụ. Nke a pụtara na oge ọ bụla njikọ dị n’etiti ngwaọrụ gị na ihe nkesa VPN agbajiri ma ọ bụ furu efu n’ihi ihe ọ bụla, onye ahịa VPN ga-akwụsị data niile site na ịpụ ma ọ bụ apta.
VPNs nọkwa ogologo oge na ụfọdụ weebụsaịtị ma ọ bụ ọbụna gọọmenti nwere ahụmahụ n’ịghọta ọrụ VPN. Ndị na-ahụ maka ọrụ VPN ma mara nke a ma mee ka otu akụkụ a na-akpọ Stealthing, Ghosting ili VPN Obfuscation (okwu okwu dịgasị iche, mana ha na-apụtakwa otu ihe ahụ). Nke a na-enye aka na-emegharị usoro ndị na-achọsi ọrụ ike maka ndị ọrụ VPN.
Ụfọdụ VPN-ovi na-aga ogologo iji nyere ndị ahịa ha aka ịchekwa aha ha ma wee bịa na njirimara a na-akpọ VPN abụọ ma obu otutu hop. Nke a pụtara na ijikọ na otu sava VPN wee mezie njikọ ahụ site na sava ọzọ VPN tupu ịpị ịntanetị. E wezụga ụzọ mbugharị ya, a na-ezobe šifriranje ya nke na-agbakwunye nchebe ọzọ.
NordVPN na-eji izo ya ezo abuo iji hụ na nzuzo na nchedo kachasị elu (mụtakwuo nke anyị Nyocha NordVPN).
E naszụga na nke a, a na-agbakwunye ọrụ ndị ọzọ na ọtụtụ VPN ọrụ oge niile dịka nchịkọta Malware, nkwụsị ọkọlọtọ weebụ na ndị ọzọ. Ọ bụ ezie na ihe ndị a nile dị mma, echezọla nzube bụ isi – na-ejikọta njikọ gị n’enweghị aha.
VPN tụrụ aro maka ezigbo ọsọ:
ExpressVPN – Hostingdebere ihe karịrị puku sava atọ gafere mba 3.000 gburugburu ụwa, netwọk ya sara mbara na-enye ndị ọrụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mba ọ bụla ohere ịnweta ngwa ngwa ngwa ngwa.
ExpressVPN ọsọ ule na-esi n’aka onye nkesa Azija. Ping = 11 ms, budata = 95,05 Mbps, broj = 114.20 Mbps (pogledajte nešto o ExpressVPN).
Ngosipụta ngwa ngwa ExpressVPN sitere in Australia na ihe nkesa. Ping = 105 ms, budata = 89,55 Mbps, bulite = 38,76 Mbps.
Ọ bụrụ na ị nọ na mba nke na-eleta Intanet n’ụzọ dị ukwuu, ma ọ bụ na-eme njem na otu, dị ka Kina, jide n’aka na ị họrọ ọrụ VPN dị mma na ịnweta gburugburu. O siri ike na Kini ebe ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile ntanetị nwere ike ịchọta ihe ọ bụla ma ọ bụ ndị ọrụ kwadoro.
Iji merie nke a, ụfọdụ ụlọ ọrụ VPN na-eji mkpofu nkesa ihe nkesa nke nwere ike inye aka na-agafe ụfọdụ ihe mgbochi ịntanetị dịka firewall network. Nke a na – ahụ maka na VPN gị na – arụ ọrụ na mba ndị ahụ nwere nyocha siri ike.
TorGuard – Ndekọ ọsọ kachasị mma, nnukwu uru, ma nweta gburugburu iyi na-aga mjestu na ọtụtụ ISP-ovima.
Njirimara VPN je 6 XNUMX – Ọrụ ndị ahịa
TorGuard – otu n’ime ọrụ VPN kachasị akwado, na-agba nzukọ na-arụ jirụ iji kwado ndị ọrụ ya (mụtakwuo ihe na Ntụleghachi TorGuard Timothy).
Otu ihe m choro imesi ike bu na obu maka oru nke teknuzu dika VPN, onwebeghi ihe nghapu maka ulo oru ndi n’enye aka na ya adighi enye ezi nkwado nke ndi ahia. Ọ dị mkpa. Ọ bụrụ n´ ị na-edebanye aha maka ọrụ VPN, gbaa mbọ hụ na ị ga-aga nyocha ụfọdụ iji hụ otu ha si eme na nkwado ndị ahịa.
Na ụfọdụ na-atụkwasị obi n’usoro usoro tiketi dị njọ, mana ha nwere ike ịka nká ịzaghachi. Vi ga – eche n’ịnọdụ n’lụ na iwe iwe ka email ọ bụla na-abịakwute gị mgbe ụbọchị ma ọ bụ abụọ gachara – cheta,-na-akwụ ụgwọ maka ihe ùgwù nke iji ọrụ ha.
Providersfọdụ ndị na-enye ọrụ VPN nüre echiche a nke inye ‘Ndụ Ndụ’ na ọrụ ha. Ọ bụ ezie na nke a nwere ike iyi ka izu ohi maka ndị n’ime gị na-eche VPN oge ndụ ya maka ma eleghị anya $ 100 – kwụsịrị ịtụle ya.
VPN mjesto na ọdịdị ha chọrọ ụlọ ọrụ iji tinye nnukwu ego na mmepe ngwaahịa, akụrụngwa, akụrụngwa, yana ụgwọ ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ha ga-ewere ego gị otu oge, nye gị oge ndụ gị – gịnị ga-eme mgbe ọdọ mmiri ahụ bidoro nkụ?
Chee echiche dika atumatu ponzi, ebe ndi ohuru no na akwado oru gi. Mgbe atụmatụ ahụ buru nnukwu ibu karịa ego ọhụụ iji kwado, ọ na-ada. Na atụmatụ ponzi nke ga-ebute mmebi ego.
N’aka nke ọzọ, onye na-eweta ọrụ nwere ike ịbelata ego ya site na ire data gị, nke dị njọ karịa ịnye ọrụ dị ala. Yabụ tupu ịkwatu kaadị akwụmụgwọ gị maka atụmatụ ndụ gị, chee maka ọghọm dị na ya nwere ike ibilite na atụmatụ dị ka nke ahụ. Onweghi onye nwere ike inye onyinye n’efu.
N’ihe eji VPN eme ihe – Gịnị kpatara ị ga-eji atụle VPN?
VPN tụrụ aro maka ụmụ akwụkwọ: NordVPN (15% ego ụmụ akwụkwọ)
Anyị niile nọ ebe ahụ dịka ụmụ akwụkwọ; oge niile na mkpirisi ego ma banye na nsogbu. Site na mgbawa nke igwe dijitalụ na nke mgbasa ozi, nchekwa na nzuzo na sọks abụrụla mkpa ngwa ngwa maka ụmụ akwụkwọ gburugburu ụwa.
Ọ bụ ezie na n’ọtụtụ oge ụmụ akwụkwọ ga-ahọrọ naanị maka ọrụ dị ọnụ ala, gịnị kpatara na mgbe ị ga-eji zụta otu dolar karịa nke kachasị mma n’ime ahịa. NordVPN dabara akụkụ a n’ụzọ dị mma ma na-akwụ ụgwọ n’akụkụ, na-enye ụmụ akwụkwọ ngụkọta nke atụmatụ ndị ọzọ.
3. VPN dị ọnụ ala Servis
Fọdụ mgbasa ozi mgbasa o na-amachi ọdịnaya dabere na ọnọdụ n’ihi ihe dị iche iche dịka iwu obodo akọwapụtara, iwu nyocha, ma ọ bụ nkwekọrịta ikikere. Na Netflixu se nalazi IPlayer BBC-a. Iji nweta ihe a, ọrụ VPN na-enyere ma ọ bụghị naanị VPN ga-eme.
Ụfọdụ VPNs dị mma na ya karịa ndị ọzọ, ebe ọtụtụ ndị na-adabere na ebe nchekwa. Kasị mma ga-arụsi ọrụ ike bugharia ihe nkesa IPs ma mepụta whitelisting eme na mbụ amachibido IP. N’ezie, ụfọdụ VPNs maara na ha apụghị akwado Netflix ma kwuo n’eziokwu na ha apụghị ịrụ ọrụ ha.
Site na ike ọsọ ya dị oke mma na oke netwọ nkesa sava dị obosara, ExpressVPN na NordVPN nwere ike ịbụ abụọ kachasị mma na azụmaahịa maka ịgbasa mgbasa odnosno mjesto na ọtụtụ isi – ọ bụghlix na. Sọ ọsọ ywere ike idobe vidiyo HD na Netflix doro anya na ndepụta nke ihe ndị mmadụ na-achọkarị.
VPN na aro maka Torrenting: ExpressVPN, TorGuard
Moguće je da nećete upotrebljavati VPN-a na bilo kojem fajlu P2P (torrenting) koji će upravljati putem e-pošte. Ihe bụ eziokwu bụ na iyi obodo ụfọdụ nwere ike ime ka egbuo gị nnukwu ma ọ bụ tụọ gị mkpọrọ ma ọ bụrụ na ejidere gị ihe na-ezighi ezi.
N’ọtụtụ oge enwere ndị na-enye ọrụ ntanetị na-echegbu iyi mgbe ha na-ekwu na ndị nkesa P2P faịlụ na-eri ọtụtụ propusnost dịnụ. Nke a arụpụtala ọtụtụ mgbe, na-ebelata ọsọ nke ndị ọrụ P2P.
Ezigbo VPN – d Torka TorGuard, ga – enyere gị aka ịgagharị na iyi iyi ndị ISPs ndị a. N’ezie, mgbe ị na-eji VPN na-akụ ihe, ISP g agaghị amatakwa na ag na-agba.
7. VPN maka Digital Freedom
Biloị na-eji njikọ njikọta na isiokwu a. WHSR nweta ụgwọ ntinye aka n’aka ụlọ ọrụ ndị a kpọtụrụ aha na isiokwu a. Echiche anyị dabeere na ezigbo ahụmahụ na data nkesa data n’ezie.